Serivisy VPN tsara indrindra amin'ny taona 2020 - Matoky sy azo antoka indrindra - Vpn
Serivisy VPN tsara indrindra amin'ny taona 2020 - Top 10 azo antoka indrindra
Mbola fantatrao hoe iza no serivisy VPN tsara indrindra harahina?Nahazo ny lamosinao izahay.Miakatra ny fandrahonana fiarovana, fantatsika rehetra fa ny VPN dia fomba mahomby hanafenana amin'ny Internet fa iza no VPN hisafidy? Io no fanontaniana lehibe indrindra.
Aza manahy amin'ity lahatsoratra ity fa hifanakalo hevitra momba ny sasany amin'ireo Serivisy VPN tsara indrindra azon'ny olona ampiasaina izahay. Izahay dia hijery ny lohan'izy ireo, ny tombony ary ny lafy tsaran'izy ireo mba hahafantaranareo ny antsipiriany rehetra momba izany.
Lisitry ny serivisy VPN tsara indrindra amin'ny taona 2020 (malaza):
Amin'ity lisitra ity dia hijery serivisy VPN malaza sy be mpampiasa eran'izao tontolo izao izahay. Mety hahafantatra serivisy VPN sasany ianao ary mety efa nampiasa azy io taloha. Izahay dia manana ny 10 Top Services VPN tsara indrindra azonao ampiasaina amin'ny 2020.
Fandraisana Internet tsy miankina VPN.
Afeno ny ampondra VPN.
VPN tsy miankina.
Andao hiroboka lalina amin'ny antsipiriany momba ireo mpamatsy VPN ireo.
Mety ho hitanao io ho avy io. ExpressVPN dia serivisy VPN be mpampiasa izay ampiasain'ny orinasa tsy miankina maro, ary koa orinasa matihanina. Noho ny fahamoran'ny fampiasana sy ny fampifanarahana ny fitaovana dia aleon'ny mpampiasa ny ExpressVPN noho ny VPN hafa. Ity VPN ity dia tsy hoe miaraka amin'ny politikam-pitsaboana ihany fa miaraka amin'ny tondra-drano P2P sy tombontsoa azo antoka amin'ny fiarovana hafa.
ExpressVPN dia mampiasa fenitra indostrialy avo lenta toy ny open-tunneling AES 256-bit encryption fiarovana izay miambina 3000+ amin'ny 93+ firenena samy hafa. Ny mpizara azy dia misy amin'ny toerana 160 afa-tsy ny Antarctica izay mahatonga ny fifandraisana amin'ny VPN haingana kokoa. Tombontsoa iray hafa manan-danja amin'ny Express VPN dia ny hafainganam-pandehany dia haingana dia haingana ary afaka manome salanisa fampidinana 100 Mbps ary mampakatra isan-karazany 30 Mbps.
Iray amin'ireo fiasa tsara indrindra ananan'ny ExpressVPN ny Kill Switch. Izy io dia programa iray hanafina ny asanao amin'ny Internet raha toa ka tapaka amin'ny VPN ianao. Raha vantany vao haorina indray ny fifandraisana VPN dia hampifandray anao amin'ny Internet izy io. Ity dia singa iray tena manampy sy miafina izay hiaro anao. Amin'ny ankapobeny, ExpressVPN dia rindrambaiko feno VPN feno ny endriny rehetra. Azonao atao ny manamarina ny Expressvpn amin'ny fipihana Eto .
Hafainganana avo sy azo ianteherana.
Anonymous Peer-2-Peer Torrenting tsy fantatra anarana.
Novonoina ny Kill Switch.
Fifanarahana fampifanarahana miovaova.
Tsy misy politika.
Fitaovana fiarovana matanjaka toy ny Kill Switch ary tsy misy politika famonoana hazo.
Diversity amin'ny fifandraisana sy mpizara.
Hafainganana avo sy mahazatra ho an'ny fifandraisana.
Drafitra mora vidy sy mora vidy.
30- andro antoka antoka vola.
24- ora mivantana Fanohanan'ny mpanjifa.
Tsy misy extension extension Safari ho an'ny fiarovana WebRTC.
Mety nahita ity VPN ity ianao raha nitady VPN hafa. Ity VPN ity no malaza indrindra ary laharana faharoa amin'ny lisitray. NordVPN dia mijoro amin'ny sokajy ambony eo amin'ny sehatry ny VPN noho ny fahombiazany sy ny serivisy ho an'ny mpanjifa.
NordVPN dia heverina ho manana dobo mpizara goavambe misy mpizara 5300+ misy any amin'ny firenena 59+ izay arovan'ny enkripsi miaramila-miloko izay 256 bit AES misy protokolotnn tunneling. Izany dia mahatonga ny tambajotra iray ho matanjaka sy azo antoka amin'ny mpampiasa ratsy rehetra. Ny hafainganam-pandehan'ny NordVPN dia mamaky loha ihany koa, ary tsy nisy tsikaritra rehefa nampifandray tamin'ny mpizara ny hafainganam-pandehan'ny fampidinana dia nahatsikaritra 135 Mbps sy ny hafainganam-pandeha 10 Mbps.
NordVPN dia miara-miasa amin'ny Tor sy torrent ihany koa, mba hahafahanao mandefa anaram-bosotra na inona na inona ary manana Kill Switch ao anaty tamba-jotra izay hanafina ny asanao raha tapaka amin'ny VPN ianao. Ny vidin'ny NordVPN koa dia mora vidy sy mitombina amin'ny resaka zara raha omena ny mpanjifany. Azonao atao ny mitsidika ny tranokala ofisialin'ny NordVPN ary mijery ireo tolotra mahaliana ananan'izy ireo ho anao amin'ny fipihana Eto .
Encryption fiarovana avo lenta.
Toeram-pisakafoanana lehibe indrindra.
Vonoy ny switch ary tsy misy politika.
Mifanaraka amin'ny fitaovana rehetra.
30- andro Fitsarana maimaim-poana.
Fiarovana matanjaka ho an'ny tambajotra.
Vidiny mora vidy.
Ny Torrenting dia tohanana amin'ny mpizara voafantina ihany.
Miaraka amin'ny hafainganam-pandeha haingana sy fifandraisana mora amin'ny mpizara, CyberGhost VPN no fahatelo amin'ny lisitra. Cyber ​​Ghost VPN dia VPN mora ampiasaina izay natao ho an'ny vao manomboka ary manana fampiasa tena tsotra sy mora azo.
CyberGhost VPN dia mitazona mpizara 6300 ao amin'ny toerana 89 samy hafa izay voaaro tsara amin'ny teny fanalahidy henjana izay manome antoka fa tsy misy tahirin-kevitra sy famoahana IP ao amin'ilay rafitra. Cyber ​​Ghost VPN dia nandray andraikitra ihany koa hametraka ny Kill Switch amin'ny rafitr'izy ireo hahazoana antoka fa hajaina ny tsiambaratelon'ny mpanjifa. Cyber ​​Ghost dia hanatanteraka ny tanjonao rehetra manomboka amin'ny streaming ka hatramin'ny fanesorana ny tranokala mankany amin'ny tondra-drano haingana.
CyberGhost koa dia manana tolotra manokana fanohanana mivantana mivantana sy manohana izay mandeha foana hanampiana ny mpanjifany raha sendra olana na aiza na aiza izy ireo. CyberGhost VPN koa dia nanolotra antoka miverina amin'ny vola 45 andro ahafahanao mahazo vola 100% raha tsy tianao ny serivisy CyberGhost. Ny hany maharatsy ny CyberGhost dia ny tsy fanohanany ny fanaparitahana Tunneling amin'ny fitaovana iOS ary tsy hanakanana ny Amazon Prime. Azonao atao ny manamarina ny Cyberghost VPN amin'ny fipihana Eto .
Mpizara 6300+ amin'ny toerana 89.
Rindrambaiko misaraka manohana.
Fifandraisana azo antoka tsara.
45-andro antoka famerenam-bola.
Fanohanana ho an'ny mpanjifa mahafinaritra.
Fifanarahana fitaovana: PC, Mac, Android,
Encryptions fiarovana mafy.
Manohana ny streaming sy ny ony.
45- andro antoka antoka famerenam-bola.
Mora ampiasaina- tonga lafatra ho an'ny vao manomboka.
Tsy manohana ny Split-Tunneling amin'ny fitaovan'ny iOS.
SurfShark VPN eran'izao tontolo izao dia heverina ho ny VPN tsara indrindra amin'ny fivezivezena, torrent, ary fitetezana azo antoka an'ny Netflix. SurfShark VPN dia nahatratra hatrany ny fitomboana noho ny fiasa sy ny fahafaham-pon'ny mpanjifa tokony homena ny mpanjifany.
Miaraka amin'ny mpizara 1700+ mahery niely nanerana ny toerana 160 tany amin'ny firenena 63 samy hafa, manana mpizara haingam-pandeha haingam-pandeha izay manome ny serivisy VPN izy. SurfShark VPN dia nampihatra IKEv2 / IPsec miaraka amina AES-256-GCM, izay lasa fiarovana mafy amin'ny hetsika ratsy rehetra ao amin'ny tamba-jotra ary manakana ny fivoahan'ny IP sy data miaraka amin'ny bandwidth tsy voafetra.
Ary koa, manana ny famonoana Kill Switch ao amin'ireo mpizara azy izy io ary misy amin'ny fitaovana rehetra hahafahan'ny mpanjifa mampiasa Surf Shark tsy miankina. Ny SurfShark dia tsy vitan'ny hoe manakana ireo tranokala mikoriana toy ny Netflix fa mora ihany koa amin'ny mpampiasa ary mora ampiasaina mba hahafahan'ireo vao manomboka misambotra azy ihany koa.
Ny SurfShark amin'ny ankapobeny dia safidy lehibe raha mitady VPN feno hery sy mahitsy ianao izay mahomby amin'ny lafiny filaminana sy serivisy. Ny drafitra SurfShark dia mitentina $ 3,45 / volana fotsiny. Azonao atao ny manamarina ny SurfShark VPN amin'ny fipihana Eto .
Seranam-piaramanidina misy mpizara 1700+.
Protokolan'ny fiarovana avo lenta.
Vonoy ny switch.
Mamela torrent sy streaming.
Mpizara sy toerana samihafa hisafidianana.
Telopolo andro Antoka fiantohana vola.
Fanatrehana ara-tsosialy malemy.
IPVanish VPN dia mpamatsy serivisy VPN malaza, ary milaza izy ireo fa VPN matoky an'izao tontolo izao. Fikambanana monina any Etazonia izy io izay manome endrika deluxe izay tsy tazana any an-kafa. IPVanish VPN dia manana tamba-jotra feno 40,000+ mpizara IP an'ny mpizara mitovy amin'ny mpiara-monina izay hita amin'ny toerana 72+.
IPVanish dia manana andian-dahatsoratra mpanjifa marobe manomboka amin'ny Windows ka hatramin'ny mpampiasa Linux noho ny rindrambaiko tsy miankina amin'ny sehatra. IPVanish VPN tsy misy politika fandrindrana ny ala ka mijanona ho anao ihany ny angon-drakitra sy ny kaontinao ary nampihatra fiarovana mafy koa izy ireo amin'ny tambajotran'izy ireo mba hialana amin'ny data na ny fivoahan'ny IP. Endri-javatra iray tsy mampino an'ny IPVanish dia ny fanolorany tahiry maimaimpoana 250 GB ho an'ny mpanjifany Sugar Sync.
IPVansih dia VPN azo itokisana satria ny hafainganam-pandehanany dia azo ekena ary tsy mamorona olana na tsy tara. Azonao atao ny mampiasa ity VPN mora ity mba hiarovana anao, handrava angon-drakitra, hanakanana ireo tranokala streaming ary inona koa. Azonao atao ny mahazo an'io VPN amin'ny fikitihana eto $ 2.91 / volana fotsiny mandritra ny drafitra isan-taona. Azonao atao ny manamarina ny IPVanish amin'ny fipihana Eto .
Serivera haingana sy haingana.
Tsy misy politika famonoana hazo.
Manohana an'i Torrenting sy P2P.
Sehatra mahaleo tena.
Fampiharana tsiambaratelo momba ny fiainana manokana
Drafitra sy tolotra mora vidy.
Fifandraisana haingam-pandeha sy azo antoka.
Tonga lafatra amin'ny tondra-drano tsy fantatra anarana.
Tsy misy politikam-kazo & tsy misy fivoahan'ny IP.
40,000 + IP mavitrika.
Tsy misy fanitarana browser.
Ka tamin'ny farany dia tsy maintsy nanapa-kevitra izahay hoe iza amin'ireo VPN voalaza etsy ambony ireo no tsara indrindra afaka mifidy Expressvpn. Ny antony maha-azo itokisana ny ExpressVPN ary manohana tranokala mivantana ary manakana ny tranokala tadiavinao. ExpressVPN koa dia manana protokol fiarovana matanjaka hiarovana anao amin'ny fandrahonana amin'ny cyber.
Manantena izahay fa nahita ity lahatsoratra ity mampahafantatra anay ianao ary afaka nahafantatra momba ny serivisy VPN tsara indrindra azonao ampiasaina amin'ny taona 2020 sy 2021. Raha mbola misy fisalasalana na add-ons hafa ianao, azafady apetraho ao anaty boaty fanehoan-kevitra etsy ambany. .
Inona no dikan'ny np amin'ny Tiktok?
Nohazavaina ny famaranana amin'ny vanim-potoana faha-3 manafintohina!
mandra-pahoviana no misy fihenam-bidy ho an'ny mpianatra paoma
andramo ny fitsarana maimaim-poana
roblox ny fomba fanaovana pataloha
Ahoana no ahitan'ny mpianatra ny mpianatra manamarina
kaody promo robux maimaim-poana 2020
mijery mivantana ny fanatanjahantena mivantana